Global Voices teny Malagasy » Nahoana No Nanasonia Hanakatona Tranonkala Malaza Iray Ireo Koreana Maherin’ny 200.000 ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Nahoana No Nanasonia Hanakatona Tranonkala Malaza Iray Ireo Koreana Maherin'ny 200.000 ?
Voadika ny 06 Avrily 2018 5:34 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam, Eunji Kim Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Korea Atsimo, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Vehivavy sy Miralenta
Pikantsary avy amin'ny tranonkala Ilbe . Ny lohatenin'ny lahatsoratra dia hoe, “Ahoana no ahafantarana raha fitaovam-panambadiana ny vehivavy”. Milaza izany fa raha misy midaroka ny sipany ary mbola miverina aminy rasipa, izy no vehivavy mendrika hovadiana.
Nisy ny fanangonan-tsonia antserasera natomboka tamin'ny 25 Janoary 2018, nitaky ny governemanta Koreana mba handràra tranonkala iray antsoina hoe Ilbe Storehouse, noho izy voalaza fa feno kabarim-pankahalana vehivavy, liberaly, ary ireo vitsy an'isa ara-poko sy ara-pananahana.
Natsangana ho angom-baovao malaza antserasera isan'andro ny tranonkala tamin'ny taona 2010. Tsy tahaka ireo habaka fifankalozan-kevitra hafa ao Korea, tsy manana rafitra anaran'ny mpisera ny tranonkala. Natao ny tahaka izany mba hanajana ny fitsipika tsy fitononanana anarana miaraka amin'ny rafitra tsy misy ambaratongam-pahefana eo amin'ireo mpiserasera. Vokatr'izany, nahasarika tanora marobe mihantsy ny fitarihana sy ny fahefana izany.
Tamin'ny volana Aogositra 2017, nahazo mpitsidika efa ho 30,8 tapitrisa isan'andro izy ary tranonkala faha-24 malaza indrindra manerana an'i Korea Atsimo. Hitan'ny mpitsikera ho “fitomboan'ny fahatezeran'ny tovolahy ao Korea Atsimo” ny lazany.
Ho setrin'ny antso hanakatonana ny IIbe, nanazava  ny biraon'ny prezidansa rehefa nandinika fa manana fahefana hanakatona tranonkala amin'ny alalan'ny Korea Herald ny Vaomiera Misahana ny Lasitra Fifandraisana ao Korea:
Raha mihoatra ny 70 isan-jaton'ny votoaty nampidirina ny vaovao tsy ara-dalàna, dia afaka manakatona na manakana ny fidirana ao amin'ny tranonkala ny vaomiera…
Ny fanangonan-tsonia antserasera nosoniavin'ny olona 235.167 dia mitaky amin'ny fitondrana mba handray fepetra manoloana ny IIbe satria loharanom-baovao diso mikasika ny olana ara-tsosialy sy ara-politika ny tranonkala. Hoy ny fanangonan-tsonia (avy amin'ny Korea Herald):
Feno fanavakavahana sy mamitaka ny teny ampiasaina ao, ary marobe ireo votoaty mampiseho sary manala baraka sy manohintohina ireo hafa eo amin'ny fananahany…
Teo anelanelan'ny taona 2012 sy 2017, nahazo baiko 1.500 avy amin'ny governemanta ny tranonkala mba hamafa ireo lahatsoratra manafintohina. Na dia izany aza, nilaza ny Vaomiera Misahana ny Lasitra Fifandraisana ao Korea tamin'ny herintaona fa tsy misy ny fitsipika ara-dalàna mandràra ny kabarim-pankahalana ao Korea Atsimo.
Maro ireo hevitra momba ny IIBe tao amin'ny Twitter manohana ireo mpanao sonia. Raha namaly ny fanadihadian'ny mpisera Twitter iray momba ny IIbe, nilaza ny mpitati-baovao iray avy ao amin'ny HajinsunTV hoe:
Mino aho fa loharanon'ny “vazivazy” ratsy momba ny politika sy ny fiarahamonina (faniratsirana vehivavy) ny IIbe ary manapoizina ny fiarahamonina Koreana. Raha mpisera ao amin'io tranonkala io ianao, dia midika fa mandray anjara amin'ny fizarana ny poiziny amin'izao tontolo izao.
Tsy vao sambany ny vahoaka Koreana no nanasonia fanangonan-tsonia mangataka ny fanakatonana ny Ilbe. Efa nisy ny fanangonan-tsonia voalohany natao tamin'ny Oktobra 2017 raha nampiditra sarina tovovavy ireo lehilahy mpisera, milaza ny sary nampidirina ho sarin'ny “anabaviny” izy ireo nandritra ny fety Cheosuk . Nahasarika fanehoan-kevitra tsy tambo isaina ny sary fa azo sokajiana ho toy ny fanorisorenana izany. Nahangona sonia 43.000  ny fanangonan-tsonia tamin'ny volana Oktobra.
Ankoatra ny fandefasana sarim-behivavy, matetika milaza fankatoavana herisetra ara-nofo ny votoatin'izy ireo. Ohatra, ny sary etsy ambony ao amin'ity lahatsoratra ity dia mampiseho lehilahy mihazona kibay “baseball” avy amin'ny lahatsoratra Ilbe antsoina hoe “Ahoana no ahafantarana raha fitaovam-panambadiana ny vehivavy”. Milaza izany fa raha misy midaroka ny vehivavy sakaizany ary mbola miverina aminy izany vehivavy izany, izy no vehivavy mendrika hovadiana.
Tsy ny vehivavy ihany no soketain'ny IIbe fa eo koa ireo vondrona ara-tsosialy voahilikilika sy marefo — vehivavy, vahiny, Koreana Tavaratra nitsoaka, Koreana shinoa eny fa hatramin'ireo tra-boinan'ny loza voajanahary aza.
Matetika ireo mpikambana ao amin'ny IIbe miantso ny vehivavy Koreana ho “alikavavy kimchi” ary ny vahoaka Shinoa ho “kadradraka”. Manohana mazava ny hetsika herisetra ny lahateny sasany ataon'ireo mpikambana ao amin'ny IIbe. Tamin'ny Jiona 2017, nanoratra tao amin'ny dinika ny mpikambana iray ao amin'ny IIbe fa nitoraka asidra tamina zazavavin'ny tarika mpihira Kpop, Twice  tao amin'ny seranam-piaramanidina izy.
Nanapa-kevitra hiala ny firenentsika ny tarika TWICE satria nahazo volabe tao Japana…Eny, lehibe ny vola, ny vola no tsara kokoa. Afaka miala an'i Korea ianareo saingy tsara kokoa raha tsy miverina intsony. Handrasako ao amin'ny seranam-piaramanidina miaraka amin'ny asidra hydrôklôridrika 10 litatra ianareo [raha mbola mitady hiverina]
Ankoatra izay, tsy mionona fotsiny ao amin'ny sehatra antserasera ireo mpikambana ao amin'ny IIbe fa manao zavatra eo amin'ny fiainana andavanandro ihany koa. @AskKorean nanome ohatra mazava mikasika ny kolontsain'ny fankahalana ao amin'ny fiarahamonina IIbe:
Ny seho ara-politika maharikoriko ahy indrindra dia ny “fandonana hatendan-kanina” nataon'ny IIbe, izay manatontosa fihinanam-be eo anoloan'ireo nanan-kavana niharam-boina tamin'ny sambo Sewol manao fitokonana tsy hihinankanina.
Mbola tsy ao izany, fa efa manakaiky.
Maneho hevitra amin'ny resaka politika ihany koa ireo mpikambana ao amin'ny IIbe. Indreto ohatra vitsivitsy izay tsapan'ireo mpanasonia marobe fa fampisehoana ratsy indrindra avy amin'ireo mpikamban'ny IIbe:
Tamin'ny volana Janoary 2018, namazivazy ny filoha teo aloha Roh Moo Hyun ireo mpiseraseran'ny IIbe tamin'ny tabilaon-dokambarotra mivaona , manova ny filoha teo aloha ho sarim-biby Koala ao amin'ny Times Square NYC. Nopetahana anaram-bositra hoe Roh-ala i Roh ary ny sarina orsa no sary matetika ampiasaina ao amin'ny Ilbe hanovàna endrik'olona [jereo ny sary etsy amin'ny farany ambony].
Roh no lasibatry ny fanentanana manevateva nataon'ny elatra havanana hatramin'ny namonoany tena tamin'ny taona 2009 raha nataon'ny Filoha Lee Myung-bak, elatra havanana famotorana noho ny kolikoly izy. Mihevitra ireo mpanadihady ara-politika sasany fa nitarika ny fandresen'ny filoha Park Geun-hye, elatra havanana hafa tamin'ny taona 2012 ny famotorana sy ny fampielezan-kevitra manevateva tamin'ny aterineto. Namana akaiky an'i Roh ny filoha ankehitriny Moon Jae-in, avy ao amin'ny elatra havia.
Tamin'ny 7 Martsa 2017, nahitana sora-baventy mivatambatana nahanton'ireo mpikambana ao amin'ny IIbe tao ivelan'ny Antenimieram-pirenena ao Korea Atsimo. Nahitàna sary efatra  ilay sora-baventy ary nampiseho ilay mpanao lalàna avy ao amin'ny antokon'ny mpanohitra Minjoo, Pyo Chang-won sy ny sarin'ny tavan'ny vadiny natao photoshop ho sarim-batana miboridana isan-karazany, ao anatin'izany ireo biby mpiteraka. Ho setrin'ny fanohanan'i Pyo ny fampiratiana hosodoko manesoeso antsoina hoe “Dirty Sleep (Torimaso Maloto)”  tao amin'ny Antenimieram-pirenena ilay sora-baventy. Mampiseho ny sarin'ny filoha teo aloha Park Geun-hye  miboridana ny hosodoko rehefa avy naongan'ny antenimieram-pirenena izy ary voampangan'ny fitsarana araka ny lalampanorenana ho nanao kolikoly.
Tamin'ny volana Oktobra 2014, mpikambana an-jatony tao amin'ny Ilbe no nanatontosa fetibe pizza teo akaikin'ny vondrona mpanao fihetsiketsehana  nitokona tsy hihinan-kanina hanoherana ny tsy fandraisana andraikitry ny governemanta taorian'ny loza voajanahary nahazo ny sambo Sewol . Loza izay nitranga tamin'ny 16 Aprily 2014, ary namoizana ain'olona 325 — izay mpianatra ambaratonga faharoa ny ankamaroany.
Tena manafintohina ankarihary eo amin'ny lasitra iraisan'ny daholobe ny zavabita ara-politikan'ny IIbe. Kanefa, arovan'ny mpanohana azy ny tranonkala amin'ny tohan-kevitra fitsipiky ny fahalalahana miteny, mametaka ireo tsikera ho vokatry ny fitongilanan'ny ankavia. 
Manasongadina ireo mpitsikera ara-kolontsaina fa fanehoana ny aretin'ny fiarahamonina misaraka  eo amin'ny ankavanana sy ny ankavia, ny manankarena sy ny mahantra, ny antitra sy ny tanora, ny vehivavy sy ny lehilahy ary ny manan-javatra sy ny tsy manan-javatra ny lazan'ny IIbe. Mety hanakana ny fiparitahan'ny angovo ratsy ao anatin'ny fotoana fohy ny fanakatonana ny tranonkala, saingy tsy afaka manasitrana ny psikôlôjia iombonana miori-paka eo amin'ny rafitra ara-politika sy ara-toekarena mizarazara.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/06/117181/
 tranonkala Ilbe: http://www.ilbe.com/8268834964
 Ilbe Storehouse, : https://en.wikipedia.org/wiki/Ilbe_Storehouse
 tranonkala faha-24 malaza indrindra : https://www.similarweb.com/website/ilbe.com
 “fitomboan'ny fahatezeran'ny tovolahy ao Korea Atsimo” : https://www.koreaexpose.com/south-koreas-angry-young-men/
 nilaza : http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/11/181_238520.html
 March 9, 2018: https://twitter.com/HajinsunTV/status/972126169071054848?ref_src=twsrc%5Etfw
 fety Cheosuk: https://en.wikipedia.org/wiki/Chuseok
 Nahangona sonia 43.000: https://www.pressreader.com/korea-republic/the-korea-times/20171101/282291025494418
 nitoraka asidra tamina zazavavin'ny tarika : https://www.soompi.com/2017/07/02/ilbe-user-threatens-use-hydrochloric-acid-twice-promoting-japan/
 March 28, 2018: https://twitter.com/AskAKorean/status/979063436834410497?ref_src=twsrc%5Etfw
 tabilaon-dokambarotra mivaona: https://www.allkpop.com/buzz/2018/01/ilbe-users-put-up-billboard-ads-in-times-square-nyc-mocking-former-president-roh-moo-hyun
 sary efatra: https://www.koreaexpose.com/dirty-sleep-satire-targets-lawmaker-wife/
 hosodoko manesoeso antsoina hoe “Dirty Sleep (Torimaso Maloto)”: http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3029512
 fetibe pizza teo akaikin'ny vondrona mpanao fihetsiketsehana: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/654589.html
 loza voajanahary nahazo ny sambo Sewol: https://en.wikipedia.org/wiki/Sinking_of_MV_Sewol
 fitsipiky ny fahalalahana miteny, mametaka ireo tsikera ho vokatry ny fitongilanan'ny ankavia.: https://onehallyu.com/topic/542161-ilbe-did-nothing-wrong/